Abenzi be-Powder ye-Ibutamoren Mesylate (MK677) - I-Phcoker
Ikhiqiza izimpushana ze-NMN ne-NRC ngobuningi!
I-Ibutamoren Mesylate (MK677)
I-Ibutamoren Mesylate (MK677) powder, eyaziwa nangokuthi i-MK677, MK-677, MK-0667, ne-L-163,191, …… ..
Umthamo: 1249kg / inyanga
I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (i-159752-10-0) ividiyo
I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) i-powder iyisidakamizwa esisebenza njengamandla, isenzo se-hormone se-hormone yokukhula ngomlomo, esilinganisa isenzo se-GH esishukumisayo se-hormone ghrelin esiphelele. Kuye kwaboniswa ukwandisa ukukhululwa, futhi kubangele ukwanda okuqhubekayo kwamazinga e-plasma amahomoni amaningana kuhlanganise i-hormone yokukhula ne-IGF-1, kodwa ngaphandle kokuphazamisa amazinga e-cortisol. Njengamanje ngaphansi kokuthuthukiswa njengendlela yokwelashwa okungase kube yilapho amazinga e-hormone ayancishisiwe, njengama-hormone ekukhuleni abantwana abangenalutho noma abantu abadala asebekhulile, futhi izifundo zabantu ziye zabonisa ukuthi zandisa kokubili ubuhlungu be-muscle kanye ne-bone mineral mass, okwenza kube ngukuthelela okuthembisayo ukwelashwa kwamaphutha kubantu asebekhulile. I-MK-677 powder iphinde ishintshe umzimba we-fat umzimba futhi ngakho-ke ingase ibe nokusebenza ekunakekeleni ukukhuluphala.
I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0) Siziqu
Igama Product I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) enamandla
Brand NAme I-Ibutamoren Mesylate (MK677)
I-Drug Class I-MK677 powder
CAS Inombolo 159752-10-0
I-molecular Fi-ormula C27H36N4O5S.CH4O3S
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-624.768 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic I-624.229 g / mol
I-Melting Point 161 ku-315ºC
BilisaIng Pi-oint 868.9 ° c ku-760 mmhg
I-Half Half-Life 4-6 amahora
Color ezimhlophe ukuze zibheke
Sukufaneleka I-H2O: i-soluble5mg / mL, icacile
Sukuhlushwa Tukushisa I-2-8 ° C
I-Ibutamoren Mesylate Aukuphikisana I-hormone yokukhula ikhulula isici; kuguqula imetabolism yamafutha omzimba; ukwandisa kokubili isisindo somzimba namathambo amaminerali; kuguqula imetabolism yamafutha omzimba
I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0) Incazelo
I-Ibutamoren mesylate (eyaziwa nangokuthi ibutamoren noma i-MK677), ikhuthaza ukuvikeleka kwe-hormone yokukhula (GH) futhi ikhulise i-insulin-efana ne-growth factor 1 (IGF-1).
I-mesylate ye-Ibutamoren ikhulisa amazinga e-hormone okukhula ngokulingisa isenzo se-hormone ghrelin futhi ibophezela kwenye ye-ghrelin receptors (GHSR) ebuchosheni. I-GHSR eyenziwe ivuselela ukukhuliswa kwe-hormone ukukhululwa ebuchosheni.
I-GHSR itholakala ezindaweni ezibucayi ezilawula ukudla, injabulo, imizwelo, izakhi eziphilayo, inkumbulo, nokuqonda. Ngakho-ke, singalindela ukuthi ibutamoren mesylate ingathinta lemisebenzi. Kodwa-ke, kuze kube manje, ukuhlolwa kwemitholampilo kuchaza imiphumela kuphela ye-ibutamoren mesylate enesifiso - futhi njengoba kulindelwe, njenge-ghrelin, i-ibutamoren mesylate ikwandisa.
Into enhle nge-ibutamoren mesylate ukuthi inyusa amazinga ama-hormone okukhula ngokwanda okuncane noma okungekho nhlobo kwamanye amahomoni, njenge-cortisol. ICortisol icindezela amasosha omzimba, inciphisa ukuphulukiswa kwamanxeba, futhi iphazamise ukufunda nokukhumbula, futhi imvamisa akukuhle ukuthi le hormone ikhuphuke.
I-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0) Indlela Yokusebenza
I-Ibutamoren mesylate (eyaziwa nangokuthi ibutamoren noma i-MK-677), ikhuthaza ukuvikeleka kwe-hormone yokukhula (GH) futhi ikhulise i-insulin-efana ne-growth factor 1 (IGF-1).
Izinzuzo zama-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0)
May UMK677 Kwangathi Usize Ngokuqina Kwethambo
May IMK677 Ingasiza Ukukhulisa Ukukhula Kwemisipha
May I-MK677 May Ingasiza Ekunciphiseni Ukulahleka Kwemisipha
May UMK677 Kwangathi Usize Ngokulala
♦ I-MK 677 Kwangathi Yehlise Imiphumela Yokuguga
♦ I-MK677 ingahle ibe nemiphumela ye-Nootropic ebuchosheni
I-powder ye-Raw Ibutamoren Mesylate (i-MK677) enconyiwe (159752-10-0) Isilinganiso
Ngokusekelwe ocwaningweni, i-20 kuya ku-30mg ibonakala iyisilinganiso esiphezulu kakhulu. Kukhona imibiko yabantu ethatha okungaphezulu kuka-30mg we-MK677 ngosuku, kodwa ayizange ihambise imiphumela engcono. Okubaluleke nakakhulu kunomthamo ubude bomjikelezo.
Kubaluleke kakhulu ukuthi uMK677 kufanele ithathwe isikhathi eside. Amazinga e-hormone yokukhula kufanele athuthuke kancane kancane emzimbeni wakho, okungathatha amasonto ambalwa ngaphambi kokuba uqale ukuzwa imiphumela.
Imiphumela emibi ye-Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) powder (159752-10-0)
I-MK677 ayizange ibangele imiphumela emibi kakhulu yabasebenzisi bayo okufanele bakhathazeke ngayo, kodwa abantu abathile bangase babe nemiphumela ethile emibi yokubheka. Abantu abasengozini yokungena kwe-insulin noma abanesifo sikashukela bangabe besengozini uma bethatha i-MK677. Izimpawu ezihambisana nalezi zimo zingase zithuthukiswe ukusetshenziswa kwe-MK677. Ngokubhekisela ekutadisweni okukhulunywe ngaye ngaphambili, abantu abadala asebenesimo senhliziyo esedlule basengozini yokuhluleka kwenhliziyo uma usebenzisa iMK677. Ngomunye umuntu onempilo, akubonakali ukuthi kukhona nemiphumela emibi eyitholile, kodwa ucwaningo oluqhubekayo luyadingeka njalo ukuqinisekisa abantu abathengi lokho.
I-Unifiram ewutshisayo (272786-64-8)
I-Raw N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) powder (6384-92-5)